တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပေကျင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိ၊ သံရုံး၊ စစ်သံရုံးမိသားစုများအားတွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ – ၂၂
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာန စစ်ဦးစီးချုပ် Gen. Li Zuocheng ၏ဖိတ်ကြားချက်အရတရုတ်နိုင်ငံ ယိချန်းမြို့တွင် ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် Sanxia လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကြရာ ဟူပေပြည်နယ်စစ်ဒေသ၊ စစ်ဒေသမှူး Maj. Gen. Ma Tao နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှအရာရှိကြီးများက လေဆိပ်တွင်ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ပေကျင်းမြို့ရှိ Nanyuan လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိကြရာ အာရှရေးရာဗျူရိုမှူး Sir. Col. Liu Zhongbin နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများကကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသံရုံးသို့ ရောက်ရှိကြရာ သံရုံး၊ စစ်သံရုံး မိသားစုများနှင့် ပညာတော်သင် သင်တန်းသားအရာရှိများက ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သံရုံး၊ စစ်သံရုံးမိသားစုများနှင့် သင်တန်းသားများအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားရာတွင် မိမိ၏ ခရီးစဉ်သည် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုမြှင့်တင်ရေးအတွက် လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ထမ်းဆောင်နေရသည့် တာဝန်များအား ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ မိမိတို့ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့်စည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်းမှာကြားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုများနှင့် လက်ရှိလျှောက်လှမ်းလျက်ရှိသည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ခိုင်ခိုင်မာမာ လျှောက်လှမ်းနေမှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သံရုံး၊ စစ်သံရုံးမိသားစုများနှင့် ပညာတော်သင် သင်တန်းသားအရာရှိများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများအားပေးအပ်ရာ သံအမတ်ကြီး၊ စစ်သံမှူးနှင့် သံရုံး၊ စစ်သံရုံးမိသားစုများက လက်ခံရယူခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ ပကေငျြးမွို့သို့ ရောကျရှိ၊ သံရုံး၊ စဈသံရုံးမိသားစုမြားအားတှဆေုံ့အမှာစကားပွောကွား
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ – ၂၂
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ဗဟိုစဈကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျနှငျ့ ပူးတှဲစဈဦးစီးဌာန စဈဦးစီးခြုပျ Gen. Li Zuocheng ၏ဖိတျကွားခကျြအရတရုတျနိုငျငံ ယိခနျြးမွို့တှငျ ရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျောခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနနေံ့နကျ ပိုငျးတှငျ Sanxia လဆေိပျမှ ထှကျခှာကွရာ ဟူပပွေညျနယျစဈဒသေ၊ စဈဒသေမှူး Maj. Gen. Ma Tao နှငျ့ တရုတျပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျောမှအရာရှိကွီးမြားက လဆေိပျတှငျပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ပကေငျြးမွို့ရှိ Nanyuan လဆေိပျသို့ရောကျရှိကွရာ အာရှရေးရာဗြူရိုမှူး Sir. Col. Liu Zhongbin နှငျ့ တရုတျပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြားကကွိုဆိုနှုတျဆကျ ကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ နလေ့ယျပိုငျးတှငျ တရုတျနိုငျငံဆိုငျရာမွနျမာနိုငျငံသံရုံးသို့ ရောကျရှိကွရာ သံရုံး၊ စဈသံရုံး မိသားစုမြားနှငျ့ ပညာတျောသငျ သငျတနျးသားအရာရှိမြားက ကွိုဆို နှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက သံရုံး၊ စဈသံရုံးမိသားစုမြားနှငျ့ သငျတနျးသားမြားအား တှဆေုံ့အမှာစကားပွောကွားရာတှငျ မိမိ၏ ခရီးစဉျသညျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကိုမွှငျ့တငျရေးအတှကျ လာရောကျသညျ့ ခရီးစဉျဖွဈကွောငျး၊ သကျဆိုငျရာလုပျငနျးအလိုကျ ထမျးဆောငျနရေသညျ့ တာဝနျမြားအား ကပြှေနျအောငျထမျးဆောငျပွီး မိမိတို့နိုငျငံအတှကျအကြိုးရှိအောငျ ဆောငျရှကျရနျလိုကွောငျး၊ မိမိတို့ဆကျဆံရေးမှတဈဆငျ့ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးကို ပိုမိုတိုးတကျကောငျးမှနျအောငျဆောငျရှကျရနျနှငျ့ ထုတျပွနျထားသညျ့စညျးကမျးမြားအား လိုကျနာဆောငျရှကျရနျလိုကွောငျးမှာကွားပွီး မွနျမာနိုငျငံ၏ နိုငျငံရေး ပွောငျးလဲမှုမြားနှငျ့ လကျရှိလြှောကျလှမျးလကျြရှိသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ ခိုငျခိုငျမာမာ လြှောကျလှမျးနမှေုအခွအေနမြေားအား ရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက သံရုံး၊ စဈသံရုံးမိသားစုမြားနှငျ့ ပညာတျောသငျ သငျတနျးသားအရာရှိမြားအတှကျ စားသောကျဖှယျရာမြား၊ လကျဆောငျ ပစ်စညျးမြားအားပေးအပျရာ သံအမတျကွီး၊ စဈသံမှူးနှငျ့ သံရုံး၊ စဈသံရုံးမိသားစုမြားက လကျခံရယူခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိ Three Gorges Dam သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ
(၇၃)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသော တပ်မတော်အငြိမ်းစားအရာရှိများအား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှတို့က ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၌ သွားရောက်ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံ